Mashiinka qashin -qubka oo dhinacyo badan leh waa mashiinka qashin -qubka ee la tuuro
Mashiinka qashin-qubka badan oo hal mar sameeya mashiinka ! Burburku waa cuntada ay jecel yihiin reer waqooyi. Waxay mar walba yihiin kuwo aan ka soocnayn burcadka inta lagu jiro ciidaha sannadka cusub iyo soo dhaweynta qaraabada iyo saaxiibbada. Gaar ahaan maalinta kowaad ee sannadka cusub, qoys ayaa wada cuna bur -bur. Waxaa la arki karaa in burbuushu ay qalbigeenna ku leedahay jago aad u sarraysa.
Taariikhda horumarka ee bur -burku waa mid aad u dheer. Kumanaan sanadood, bur burku waa mid ka mid ah cuntooyinka dadku aad u jecel yihiin. Illaa iyo hadda, qofna ma dareemi doono wax la yaab leh burcadka. Hadda oo ay maalmuhu wanaagsan yihiin, cunista bur -burku waxay noqotay shaqo aad caadi u ah. Uma baahnid inaad cuntid bur -bur inta lagu jiro Bandhigga Guga. Warshado badan oo wax lagu karsado ayaa sameeyay makhaayad qashin qub ah oo mawduucoodu yahay. Sidan oo kale, bur burku meel walba ayuu yaal. Sidan oo kale, waxaa soo badanaya shaqaalaha sameeya boogaha. Horumarka bulshada iyo hagaajinta heerka dhaqaalaha, Mushaharka shaqaalaha ayaa sidoo kale kordhay iyadoo sicirku kor u kacay, taas oo waxoogaa saamayn xun ku yeelan doonta makhaayadda qashin -qubka.
Mashiinka qashin -qubka ee 900t ah oo ay soo saareen shaqaalaha sayniska iyo farsamada ee mashiinnada cuntada Jiangbei Fuxin waa mashiin aad u bani -aadam ah oo soo saara bur -burinta. Mashiinkani wuxuu leeyahay guddi koontarool oo aad u sax ah wuxuuna ku habboon yahay hawlgalka iyo dayactirka. Waxay ka samaysan tahay bir aan tayo lahayn oo dibadda laga keeno, taas oo la isticmaali karo waqti dheer, qaabkuna sidoo kale waa mid aad u sarreeya.
Cabbirka, miisaanka iyo saamiga maqaarka iyo walxaha bur -burinta ee uu soo saaray mashiinka qashin -qubka ayaa lagu hagaajin karaa sida uu doono, taas oo gebi ahaanba iska ilaalinaysa xaaladaha xun sida baxsiga iyo dildilaaca. Burburinta la soo saaray ayaa aad u dabacsan, dhadhan, gluten iyo dulqaad, waxayna leeyihiin faa'iidooyin badan marka la barbar dhigo burcadka gacanta lagu soo saaray.
Mashiinkani wuxuu kaloo soo saari karaa badeecado cabbirkoodu kala duwan yahay. Shuruuddu waxay tahay in roodhida, dhalada dhejiska, burushka shaaha, burushka Sifang, iwm la soo saari karo iyada oo la beddelo caaryada. Mashiinkan waxaa la samayn karaa hal mar marka la soo saaro bur -burinta, taas oo si wanaagsan u hagaajin karta qiimaha nafaqada ee bur -burinta, sii dheereyn karta nolosha shelf -ga iyo ka fogaanshaha khaladaadka, Waa mashiin wanaagsan oo runtii ka caawiya macaamiisha inay lacag badan helaan.
Waqtiga dhejinta: Sep-30-2021
Pan-shiilay caadka cufan bolle Machine , caadka cufan bolle Machine , cufan caadka bolle Machine , guriga caadka cufan bolle Machine , caadka cufan bolle Machine Samaynta , Automatic caadka cufan bolle Machine , All Products